मुन्द्रेको कमेडी क्लब बन्द भएपछि यस्तो अवस्थामा फेला परे जितु नेपाल – Gazabkonews
मुन्द्रेको कमेडी क्लब बन्द भएपछि यस्तो अवस्थामा फेला परे जितु नेपाल
मुन्द्रेको कमेडी क्लब बन्द भएपछि यस्तो अवस्थामा फेला परे जितु नेपाल, काम पाउन छाडेपछि करिश्मा पनि तनावमा, के साँच्चिकै संकटमा परेका हुन् जितु र करिश्मा ? यस्तो भिडियो बाहिरियो
गीत गाएरै महिनाको लाखौँ कमाउने चर्चित गायिका रचना रिमालले किनिन् काठमाडौँमा भव्य बंगला, यि युवकसँग प्रेममा रहेकी रचना भन्छिन् बुबा आमाले माने यही मंसिरमा विबाह गर्ने हो, हेर्नुहोस् भिडियो
बसन्त सापकोटाले ल्याएपछि हिट भएकी चर्चित गायिका समिक्षा अधिकारीले किन उनैलाई अंगालो हाल्नै भक्कानिइन् ? पल र समिक्षाका -ण्ड-पछि समिक्षाले भेट्न पुगिन् बसन्तलाई र पलबारे खोलीन् अहिलेसम्म बाहिर नआएको रहस्य, पल र समिक्षाको विबाहको कुरा अब रोकिएको हो ? यस्तो रहेछ भित्री कुरा, हेर्नुहोस् भिडियो
पल शाहले यि सुन्दरीसँग लगाएका रहेछन् भाईटिका, एउटै भिडियोको २ लाख लिने पलले बहिनीलाई निकै कम रकम दिएको भन्दै खैलाबैला, रमाइलो गर्दै बहिनीले खोलीन् दाजुको पोल, भिडियो भाइरल
चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीले छोरी जन्माएपछि आयुष्मानको घरमा छायो खुशीयाली, भाउजुले अभिनय छाडेर घरमा लक्ष्मी भित्र्याएको भन्दै देवर आरिसमानले भाउजुको खुट्टा नै ढोगे, आफ्ना भाईले बुढीको खुट्टा ढोगेको आयुष्मानले देखेपछि दिए यस्तो अचम्मको प्रतिक्रिया, हेर्नुहोस् भिडियो
चर्चित नायिका वर्षा शिवाकोटीले सुटुक्क गरिन् प्रेमीसँग विबाह, मिडियालाई थाहा दिन्न भन्दा भन्दै युट्युबर पुगेर सारा कुरा बाहिर ल्याए, वर्षा शिवाकोटीका बाबुले दिएका रहेछन् करोडौँको दाइजो, प्रेमीलाई आफ्ना बाबुले कार दिएपछि खुशीले फुरुगं छिन् वर्षा
काठमाण्डौ – प्रदेश नम्बर १ को पूर्वि क्षेत्रमा अत्याधिक छायांकन गरीएको चलचित्र पूरानो बुलेट सार्वजनिक भएको छ । केहि दिन अधिमात्र युट्युवमा सार्वजनिक भएको चलचित्रलाई हाईलाइटस् नेपालले सार्वजनिक गरेको हो । हाल सो चलचित्र युट्युव ट्रेन्डिङको सिर्ष स्थानमा रहेको छ ।
चलचित्रमा अनुपबिक्रम शाहि, बर्षा सिवाकोटि र माला लिम्बुले मुख्य पात्रको भूमिका निभाएका छन् । युट्युमा दर्शकहरुले सम्पूर्ण कलाकारहरुको अभिनयको प्रसंसा गरेका छन् ।कसरी भयो त हजुरहरुको मनमा पर्नसफल चलचित्र पूराने बुलेको छायांकन ? हेर्नकालागी तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला । भिडियो:
नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको तयारीमा जुटेको छ । केन्द्रीय बैंकको ४÷१२ नीतिले रुष्ट बनेका शेयर लगानीकर्तालाई खुशी पार्ने गरी गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले मंसिर १८ गते मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको थियो । अहिले त्यो भन्दा पनि पहिले नै पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारीमा जुटेको छ । तिहारसकिए लगतै मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा जुटने तयारी गरिने केन्द्रीय बैंकका उच्च कर्मचारीले बिभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आएका थिए । त्यही अनुरुप मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा केन्द्रीय बैंक जुट्न थालेको हो ।
#c7#राष्ट्र बैंक पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा दुई बटा बिषय केन्द्रीय हुने सम्भावना देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो उच्च प्राथमिकतामा परेकाे ४÷१२ नीति र दोस्रो लगानीयोग्य पुँजी (तरलता)को अभावलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा बढी ध्यान दिने छ ।यही कात्तिक महिनाबाट निक्षेपको ब्याज साढे ११ प्रतिशतसम्म पुर्याएपछि त्यसलाई हस्तक्षेप गर्दै ९.३६ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी निक्षेपको ब्याजदर तोक्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही अनुसार बैंकहरुले पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका थिए ।
अहिले पनि तरलताको अभाव छ । सरकारी खर्च उच्च दरमा हुन नसकेका कारण केन्द्रीय बैंकमा रहेका सरकारी खातामा रकमको थुप्रो लागेको छ । यता बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । त्यस्तो अभावलाई कसरी कम गर्ने भन्ने बिषयमा केन्द्रीत रहेर मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यसैगरी, दोस्रो ४÷१२ नीति प्रति पनि लगानीकर्ता असन्तुष्ट छन् । त्यसमा पनि मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा केन्द्रीय बैंकको ध्यान जाने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले एक जना व्यक्ति वा संस्थाले एक बैंक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँ र बढीमा तीन संस्थाले १२ करोड भन्दा बढी शेयर धितोमा कर्जा लिएर शेयरमा नै लगानी गर्न नपाउने नीति ल्याएको थियो । केन्द्रीय बैंकको त्यस्तो नीतिले शेयर लगानीकर्ताहरु रुष्ट बनेका थिए । त्यसरी रुष्ट बनेका लगानीकर्तालाई फेरि फकाइ तुल्याइ गर्ने नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
लगानीकर्ताहरुको छाता संगठनहरुले पनि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको ४÷१२ नीति हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको त्यस्तो मौद्रिक नीति ल्याएसँगै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटी दवाब दिँदै आएका थिए । अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबैले पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा ४÷१२ नीतिमा पुनरावलोकन गरिने आश्वासन दिँदै आएका थिए ।
लगानीकर्ताहरु पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरले दिएको आश्वासन पूरा हुनेमा ढुक्क छन् । अर्थमन्त्री शर्मा पनि पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको कार्यकालमा नेप्सेले दुई पटक नयाँ रेकर्ड बनाएको र आफ्नो पालामा कम्तिमा एक पटक भएपनि नयाँ रेकर्ड बनाउन चाहिरहेका छन् । त्यसैले पनि ४÷१२ को नीति खारेज गर्नु पर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री शर्मा उभिएका छन् ।
कुल कर्जाको २ प्रतिशत पनि शेयर बजारमा लगानी नभएको अवस्थामा ४÷१२ नीतिको त्यान्द्रो झुण्डाइ रहनु पर्छ भन्ने पक्षमा उनी नभएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई पनि त्यही सुझाव दिँदै आएकाले आगामी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा ४÷१२ नीतिको नीति हट्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । यद्दपी मौद्रिक नीतिको समिक्षा नआएसम्म लगानीकर्ता भने ४÷१२ नीतिको नीति हटने सम्वन्धमा ढुक्क हुन भने सकिरहेका छैनन् ।